DEG DEG: Midowday Bulshada Galkacyo oo si wada jir ah u bur-buriyay xuduud Beeneedka Labada Maamul – idalenews.com
DEG DEG: Midowday Bulshada Galkacyo oo si wada jir ah u bur-buriyay xuduud Beeneedka Labada Maamul
Galkacyo((INO) -Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug oo horey u kala qayb-sanayd laba dhinac ayaa hadda mar kale dib la isugu furay wax yar ka dib markii lagu dhawaaqay in madaxweynaha Soomaaliya uu yahay Maxamed C/laahi Farmaajo.
Dad-weyne aad u fara badan oo labada dhinac ah ayaa gacmaha is-qabsaday ,waxaana ay si wada jir ah taageeradooda ugu muujiyeen qaybaha ay ka kooban-tahay magaalada , iyadoo dhamaan la bur-buriyay dhagaxaantii ay Gaas iyo Guuleed kala dhex-dhigeen labada Bulsho.
“Walaal dareenkayga wax aan ku qiyaaso garan maayo ,waxaan aad ugu faraxsanahay in labada dhinac ee Gal-Mudug iyo Puntland ay maanta yihiin kuwa isku furan “ ayuu yiri Axmed Jaamac oo kamid ah dadka deegaanka Gaalkacyo.
“Tani waxa ay calaamad u tahay in Gaas iyo Guuleed ay dadka kala geeyeen iyaga oo dano gaar ah eeganaya ,waxaana ku faraxsanahay in aan maanta aan joogo waqooyiga Gaalkacyo oo aanan horey u imaan jirin “ ayuu mar kale yiri Jaamac oo tilmaamay in Bulshada Gal-Mudug ay soo dhaweynayaan madaxweynaha cusub.
Suldaan C/salaam oo kamid ah waxgaradka Puntland ayaa madaxweynaha cusub ugu baaqay in uu ka fogaado nin jeclaysi inta uu joogo xafiiska ,isaga oo ka digay in kooxo gaar ah uu talada dalka gacanta u galiyo.
“Waxaa farxad weyn inoo ah inaan muujino taageerada aan u hayno madaxweynaha cusub iyo is-dhex-galka ka bilowday magaalada Gaalkacyo “ ayuu yiri Suldaanka oo ka hadlayay munaasabad lagu taageerayay madaxweynaha oo ka dhacday waqooyiga Gaalkacyo.
Xuduudkan oo ka kooban jidgooyooyin ka samaysan cara-kaabo iyo dhagaxaan ayaa yaalay xad la sheegay in uu kala qaybiyo labada dhinac oo xigta dhanka koonfurta kuna dhow sanadkii hore lagu dagaalamay.
Ugu danbayn , Dadweyne Faraxsan ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqayay ereyo wadaniyad-da xoojinaya ,waxaana doorashadan ay noqonaysaa mid si aad ah isugu soo dhaweysay dadka gobolka Mudug oo dhowr jeer oo hore dagaalamay.
Dowladda Itoobiya oo soo dhaweysay doorashada madaxweynaha cusub ee Somalia
Ugaaska Beesha Xawaadle oo la dardaarmay madaxweynaha cusub ee Somalia -VIDEO